Akukho mntu usindileyo kwingozi yenqwelomoya ye-An-12 eRashiya eSiberia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo » Akukho mntu usindileyo kwingozi yenqwelomoya ye-An-12 eRashiya eSiberia
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba zeBelarus Breaking • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • abantu • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Akukho mntu usindileyo kwingozi yenqwelomoya ye-An-12 eRashiya eSiberia.
Irhuluneli yeOblast yaseIrkutsk yaqinisekisa ukuba bonke abo babekhwele enqanaweni babhubhile, yaye akukho namnye usindileyo ofunyenweyo phakathi kwale ngqushu.
Inqwelomoya ye-Belarusian An-12 yeSoviet-era turboprop cargo iphahlazeka kwaye iyatshisa eSiberia, eRashiya.
I-An-12 yinqwelomoya ye-Soviet-era turboprop eveliswe phakathi kwe-1957 kunye ne-1973, ngokukodwa imikhosi exhobileyo ye-USSR.
Esi siganeko siphawula yamva nje kuthotho lweentlekele zomoya eSiberia nakwiMpuma Ekude yaseRashiya.
Ngokutsho kwamagosa aseRashiya eMoscow, ubuncinane abantu abasixhenxe babekhwele Antonov An-12 Inqwelomoya ethe yantlitheka eSiberia, kufutshane nesixeko sase-Irkutsk.
Inqwelomoya kuyabonakala ukuba yeyenkampani yeenqwelomoya yaseBelarusian 'Grodno' kwaye ibisenza uhambo lokubhabha lomthwalo eSiberia, Rhashiya.
“Ngo-2:50 emva kwemini ngexesha laseMoscow, i An-12 Inqwelomoya, ebhabha phakathi kweYakutsk ne-Irkutsk, yanyamalala kwiradar, ”latsho igosa laseRussia.
"Ekuqaleni, abantu ababini babulewe kwaye ikamva labanye abantu abahlanu alikaziwa."
Ngokweengxelo zokuqala, indawo yokuphahlazeka ifunyenwe kwindawo yedolophana yasePivovarikha (kwindawo yase-Irkutsk), engekude ne-airfield. Inqwelomoya yaya kwisangqa sesibini ngexesha lokufika emva koko yanyamalala kwi-radar.
Ngokutsho kwe-Russian Ministry of Emergency Situation, xa iiyunithi zomlilo kunye nokuhlangula zifika kwindawo yesiganeko, inqwelomoya yayivutha umlilo, kodwa iinkonzo zikaxakeka ziye zakwazi ukucima umlilo.
Abantu abangaphezu kwe-100 kunye neenqwelo ze-50 kuthiwa zikwindawo kwaye zincedisa ekusebenzeni kokubuyisela.
The An-12 yinqwelomoya ye-turboprop yexesha laseSoviet eveliswe phakathi ko-1957 kunye no-1973, ngokukodwa imikhosi exhobileyo ye-USSR. Sele isetyenziswa liqela leenqwelomoya ezazisakuba yiSoviet Union, ikakhulu kwiinqwelomoya zothutho.
Kwi-2019, i An-12 yantlitheka kufutshane nesikhululo seenqwelomoya saseLviv eNtshona Ukraine, yabulala abahlanu yaza yenzakalisa abanye abantu abathathu.
Esi siganeko siphawula yamva nje kuthotho lweentlekele zomoya kwi eSiberia kunye neMpuma Ekude yaseRashiya. NgoJulayi, abasebenzi bexesha likaxakeka abaphanda ngokunyamalala kwenqwelomoya ye-Antonov An-26 turboprop babhengeze ukuba bayifumene imizimba yabakhweli abangama-22 kunye nabasebenzi abathandathu emva kokuba yantlitheka eliweni kwipeninsula yaseKamchatka.